Jawaari Gud.barl- S. oo sheegey in labada aqal berito gudiga Dorashada m/weynaha magacaabayaan. | WARSOM.COM - Wararka Soomaaliya,warka soomaaliya,Somalia News
Home Macluumaadka GMDQ & Xisbiyada Jawaari Gud.barl- S. oo sheegey in labada aqal berito gudiga Dorashada m/weynaha...
Jawaari Gud.barl- S. oo sheegey in labada aqal berito gudiga Dorashada m/weynaha magacaabayaan.
Kadib kulan maanta magaalada Muqdisho ay ku yeesheen guddoonka labada aqal ee Soomaaliya ayaa looga wada hadalay arimo la xiriira doorashada madaxweynaha oo marar badan oo hore dib u dhac ku yimid.
Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Prof Max’ed Cismaan Jawaari ayaa xafiiskiisa ku qaabilay guddoonka aqalka sare ee maalintii shalay la doortay iyaga oo ka wada hadlay arimo la xiriira doorashada madaxweynaha iyo go’aan ka gaarista guddiga qaban-qaabada doorashada oo labada aqal wada jir uga arinsanayaan.
Guddoonka labada aqal ayaa ugu danbeyntii isku afgartay in maalinta berri ah kulanka baarlamaanka lagu dhiso guddiga qaban-qaabada doorashada madaxweynaha, kuwaa oo soo saari doona jadwalka doorashada iyo waqtiga kama danbeysta ah oo ay doorashada dhici doonto.
Ugu danbeyntii, war ka soo baxay beesha caalamka ayaa looga dalbaday guddoonka labada aqal in ay dadajiyaan doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo dib u dhac mudo dheer ah ku yimid.
Previous articleBarlamaanka Galmudug oo loo diidey fadhi ay yeelan lahaayeen.
Next articleHorjoogaha Sarifleyda Hargeysa oo ka warbixiyey Hoos u dhaca shillinka SLAND.